Ma dhab baa in Shariif Xasan uu gabi ahaan Bedelay Ciidamadii Ilaalada Madaxtooyada Baydhabo? – Kismaayo24 News Agency
Ma dhab baa in Shariif Xasan uu gabi ahaan Bedelay Ciidamadii Ilaalada Madaxtooyada Baydhabo?
by admin 30th October 2018 0124
Xilli ay xaaladaha siyaasadeed ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya marayaan meel xasaasi ah ayaa lagu soo warramay in xalay si buuxda isbaddal loogu sameeyay ciidankii ilaalada ka ahaa xarunta madaxtooyada ee magaalada Baydhabo. Wararka waxaa aad u qoraya warbaahinta maxaliga ah ee Soomaaliya.
Waxaa la shaaciyay war ku saabsan in kulan deg deg ah uu xalay madaxweynaha wakhtigiisu sii dhammaanayo ee maamulkaas Shariif Xasan Sheekh Aadan la yeeshay lataliyeyaashiisa dhinaca ammaanka, kaasoo laga soo saaray go’aanka lagu baddalayay illaalada madaxtooyada oo la sheegay in isla xalayba la dhaqangaliyay.
Wararka ayaa intaas ku daray in tallaabadan uu Shariif Xasan qaaday ka dib markii qaar ka mid ah illaalada madaxtooyada lagu tuhmay iney taageero u hayaan murashaxiin kale oo ka mid ah siyaasiyiinta ku loollami doona doorashada madaxtinnimo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
BBC-da ayaa xiriir toos ah la sameysay wasiirka amniga ee maamulka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed oo loo yaqaanno ‘Xasan Eelaay’, wuxuuna beeniyay warkaas.
“Waa macluumaad been abuur ah oo ay faafinayaan dadka mucaaradka ku ah madaxweyne Shariif Xasan, wax ka jirana ma laha. Kaliya waxay doonayaan iney khalkhal ku galiyaan ammaanka magaalada” ayuu yiri.
“Wax isbaddal ah lama sameynin. saraakiishii iyo ciidamadii horay u joogay ayaa wali gacanta ku haya amaanka madaxtooyada, ma garanayo meesha laga keenay warkaas been abuurka ah”.
Waxa uu sidoo kale sheegay in uu si xowli ah u socdo ol’olaha doorashada, maadaama uu wakhtiga soo dhawaaday.
“Dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed wali way socdaan siyaasiyiintana kulamo joogto ah ayay yeelanayaan, maalin kastana waxaa soo xoogeysanaya xamaasadda ku saabsan doorashada”.
Arrintan ayaa ku soo aadday xilli uu dhawaan Shariif Xasan dib uga soo laabtay shirkii madaxda maamul goboleedyada ee lagu soo gaba gabeeyay magaalada Garoowe.
Musharixiinta xilka madaxweynenimo qaarkood ayaa la sheegay in ay leeyihiin illaalo ciidan oo xoog badan, kuwaas oo iyaga ku heeb ah, taas oo laga yaabo in isbadalka madaxtooyada ay horseedi karto.
Nabadoon Xaarin Oo Si Kulul Uga Hadlay Nidamka 4.5 taageereyna Go,aanka Madaxweyne Gaas-Daawo Muuqaal
Tifaftiraha K24 2nd February 2016
Ragga Soomaaliyeed Waxey Aad U Jeceyl Yihiin Gabadha Aay Qodobadaan Ka Helaan Mana Iloobaan Cimrogooda Oo Idil..
Top News: Ergooyinka Shirka maamulka u sameynta Gobaladda Dhaxe oo eedeyey Dowladda iyo………..